यस्तो देश, जहाँ पहिला यौनसम्पर्क गरेर विवाहका लागि केटा छानिन्छ ! – Saurahaonline.com
यस्तो देश, जहाँ पहिला यौनसम्पर्क गरेर विवाहका लागि केटा छानिन्छ !
संसारमा विभिन्न देश समुदायमा जातजाती अनुसार आफ्नै परम्पराहरु हुन्छन् । तर कतिपय परम्पराहरु सुन्दै अनौठो लाग्छ । परम्परा अनुसार समाजको नियममा बाँधिनु पर्ने हन्छ । आ–आफ्नो ठाउको यस्तै छ कम्बोडियाको सुन्दा आश्चर्य लाग्ने खालको परम्परा जहाँ छोरीलाई आफ्नो जिवन साथी रोज्न एक भन्दा बढी पुरुषसंगका यौन सम्बन्ध राख्न अभिभावकले नै उक्साउँछन् ।
कम्बोडियाको क्रिउन आदिवासीहरुमा विवाहको एउटा अनौठो परम्परा रहेको छ । आदिवासी समुदायका चेलीहरु विवाह पूर्वनै आफुले चाहेका एकभन्दा धेरै युवकहरुसँग यौन सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । उक्त लभ हट अर्थात् प्रेम झुपडीमा अविवाहित छोरीहरु आफूले चाहेको युवकसँग रात बिताउन तथा सहवास गर्न समेत पाउँछन् ।